छिमेकी देशका मुस्लिमहरूले नक्कली कागजात पेश « Salleri Khabar
छिमेकी देशका मुस्लिमहरूले नक्कली कागजात पेश
२० कार्तिक, काठमाडौं । छिमेकी देशका मुस्लिमहरूले नक्कली कागजात पेश गरी नेपाली नागरिकता लिदै पछिल्लाे समय नक्कली कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिने क्रम तराइका अधिकांश जिल्लामा बढ्दै गएको छ ।
यसरी नागरिकता लिनेमध्ये अधिकांश बंगलादेश र भारतका नागरिक रहेका छन् । धेरैले शैक्षिक प्रमाणपत्र, गाविसको सिफारिस तथा प्रहरीको सर्जमिनलगायतका सम्पूर्ण कागजपत्र नक्कली पेस गर्ने गरेका छन् । तर, केहिले भने सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा नागरिकता हात पार्ने गरेको श्रोतको दाबी छ । नक्कली कागजपत्र पेस गरे पनि नागरिकताका लागि सनाखत गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण दुवै खाले प्रक्रियामा नेपाली नागरिकको सहयोग अनिवार्य देखिएको छ । नेपालस्थित नातेदारले भाइ, छोरा आदि सम्बन्ध बनाएर सनाखत गर्ने गरेका छन् । यसै क्रममा एक जना भारतीयले बाँकेबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुलासा भएको छ ।
भारत बस्ने नौसाद नाम गरेका व्यक्तिले झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको खुल्न आएको छ । २०६३ सालमा नौसादले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको रेकर्डमा उल्लेख छ ।नौसादले नेपालगन्ज वडा नं. १४ मा बसोबास रहेको झुटो विवरण पेस गरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका हुन् । त्यसैगरी भारतीय नागरिक शेष नैमुद्दिनले पनि पर्साबाट नेपाली नागरिक लिएका छन्। उनले बाबु शेष जाहिर हुसेन र ठेगाना जिल्ला पर्सा, वीरगंज उ.म.न.पा. वडा नं. २ देखाई नागरिकता लिएका हुन्। उनले २०४७ कार्तिक १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट ना.प्र.नं. १६०३१९३९८ को वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ ।
भारत बिहार प्रदेश पूर्वीचम्पारण अञ्चल छौडादानों थाना दरपा गाउँ नरकटिया १३ आदापुर (विधानसभा) भाग संख्या मतदान केन्द्र संख्या ९१, गृह संख्या ५५४ मा नामरहेको शेष नैमुद्दिनले २०३३ सालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन नाम दर्ता गराएकोमा सो प्राप्त भएपछि पुनः २०४७ सालमा वंशजको नागरिकता लिएका हुन्। निजको बाबु शेष जाहिर भारतमा नै घरबास गरी बसेकोले भारतीयको छोराले वंशजको नागरिकता पाउन नसक्ने भएको हुँदा छानबिन गरी कानूनी कारवाही गरी पाऊँ भनी निवेदन समेत परेकाे छ।
प्रमोद विक्रम शाहसमेतका व्यक्तिले विभिन्न मितिमा उजूरी निवेदन दिएका हुन् । उजूरी निवेदन परेपछि गृह मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट छानबिन भइरहेकाे छ। त्यस्तै भारत भारतीय नागरिक वर्षीया मोहम्मद सलमान हल्वाईलाई नक्कली कागजात पेश गरी नागरिकता लिएकाे कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हल्वाईले २०७० मंसिर १२ गते नेपालगन्ज–५ निवासी आविद हुसेन हल्वाईलाई नक्कली बुवा बनाएर बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ६९–०१–७०–०४३५५ को नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धान गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको हाे। त्यसैगरी रौतहटको राजपूर जन्मिदै नजन्मिएको बच्चाको नाममा काल्पनिक मुस्लिम नाम राखेर जन्मदर्ता बनाएको कुरा बाहिर आएको छ। सो जन्म्दर्ताको आधारमा १६ वर्षपछि जो सुकै बङ्लादेशी वा पाकिस्तान मुस्लिमलाई नागरिकता दिन सकिने छ।
त्यसकारण पछिल्लाे केही वर्ष यता भारतीय, बंगलादेशी र पकिस्तानी मुस्लिमहरूले जाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर नेपालमा बसोबास गर्न कोशिस गरिरहेका छन्। जसले नेपाल असुरक्षा बढ्ने खतरा बढ्दै गएकाे छ। नक्कली कागजातहरूमार्फत मुसलमानहरूले नेपालमा जनसंख्या वृद्धि गर्न कोशिस गरिरहेका छन्। भविष्यमा नेपालले भारतजस्तै समस्याहरूको सामना गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।